Ndị na-emepụta ihe nduku 11er na-agba afọ iri asatọ - Potatoes News
Processor nduku 11er agba 80th ncheta
Taa, ọgbọ nke atọ na-achịkwazi 11er ma bụrụkwa onye na-arụ ọrụ ọpụrụiche a na-eme ka oyi na Austria.
Vorarlberg azụmahịa ezinụlọ 11er na-eme emume ncheta nke iri asatọ ya na Maachị 80, 7. Wilhelm Grabher tọrọ ntọala nke a na 2021. Site n’echiche ịnye ndị obodo na gburugburu ya mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ, ya na ụmụnne ya nwoke atọ tọrọ ntọala akwụkwọ nri na ahia mkpụrụ osisi na Lustenau. Companylọ ọrụ 1941er ghọrọ nnukwu ma ama nke ọma na 11s na mmepụta ọla edo french, nke 1970er ka mara.
Taa, ọgbọ nke atọ na-achịkwazi 11er ma bụrụkwa onye na-arụ ọrụ ọpụrụiche a na-ekpo ọkụ na Austria.
Nri nduku abụrụla isi ụlọ ọrụ ikike / Image: 11er
Mmalite 80 afọ gara aga
Ezinụlọ Grabher nwere mmụọ ịsụ ụzọ oge niile. Akụkọ ụlọ ọrụ ahụ malitere na March 7, 1941, na ntọala azụmahịa azụmahịa nke mkpụrụ osisi na akwukwo nri na Lustenau. Gmụnna Grabher anọ ahụ bụ Wilhelm, Rudolf, Ludwig na Ernst setịpụrụ onwe ha ebumnuche nke inye ndị obodo ndị gbara ha gburugburu mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kacha mma na ụlọ ọrụ mgbe ahụ "Wilhelm Grabher & Co, Landesprodukte, Versand und Großverteiler, Südfrüchte" - na mbido ya na ịnyịnya na ụgbọ, mechara jiri obere gwongworo.
Na Machị 1986, ụlọ ọrụ nne na nna kewara n'ezie na azụmaahịa ezinụlọ atọ bidoro: Tiefkühlexpress Grabher LLC, FruchtExpress Grabher & Co na nke taa 11er Nahrungsmittel LLC. Aha "Elfer" malitere ihe karịrị 100 afọ gara aga, enwere ike ịkọghachi ya na aha ịkpọ aha na ọdịda anyanwụ Austria, ebe ezinụlọ Grabher nwere ụmụ 11. Aha a na-aga site na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ 11er ma bụrụkwa akụkụ dị mkpa nke njirimara ụlọ ọrụ ahụ.
Afọ 50 nke 11er French fries
Ọ bụghị ihe niile dị na 11er ka na-agbanye tuber. Na 1968, 11er guzobere saịtị ahụ na Frastanz wee nwee nkwado na mmepụta nke sauerkraut. Site na nmalite nke achọwanye na nri ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ gbanwere na mmepụta nke fries French na 1971 - 50 afọ gara aga. Nke a mere ka azụmaahịa ezinụlọ buru ibu ma ama nke ọma karịa ala obodo. Na 11er Pommes, ụlọ ọrụ ahụ mepụtakwara si na ụlọ oriri na ọ restaurantụ toụ gaa ụlọ ahịa. Kemgbe ahụ, ọla edo-edo edo French fries nwekwara maka ọ enjoyụ n'ụlọ.
Gbado anya na ngwaahịa nduku
Oge na-adịghị anya 11er siri ike pụta ìhè, na ebumnuche nke ị nweta ihe kacha mma na nduku. Ya mere, na njedebe nke 1980s, ụlọ ọrụ ahụ guzobere akara nke nduku nke mbụ ya. Nke a tọrọ ntọala maka taa 11er crispy rösti na ezi 11er croquettes. Ejiri ihe kachasị ọhụrụ na nlezianya tụọ anya, 11er meriri ịnyefe nri kachasị mma si Austria na ndị ọrụ ire ere na nri site na usoro ndị mepere emepe na mpaghara mpaghara.
Naanị nduku na-acha odo odo site na ebe kachasị mma na-eto eto n'akụkụ osimiri Danube na osimiri March na Austria na site na mpaghara ndịda Bavarian ka ejiri mee ihe maka iri nri 11er. “Anyị kwenyesiri ike na ọ bụ naanị ezigbo mma dị mma. Ọ bụ ya mere 11er ji na-eche mgbe niile, na-emeziwanye ma na-eke ihe ọhụrụ, ”Onye isi nchịkwa Thomas Schwarz na-ekwusi ike.
Ihe mere anyị ji eme ihe anyị na-eme
11er - Ọkachamara onye nduku si Austria
Anyị bụ ụlọ ọrụ ezinụlọ nke oge a site na ọdịda anyanwụ nke Austria nke na-etinye aka kpamkpam na nduku. Anyị hụrụ ezigbo nri n’anya ma kwenyesie ike na ọ na-atọkarị ụtọ “ka esi eme ụlọ”. Ọ bụ ya mere anyị ji eji ọtụtụ ịhụnanya na nlekọta arụ ọrụ kwa ụbọchị iji mepụta ọmarịcha potato kachasị mma na Austria. Site na fries nke fris rue croquettes ruo aja aja na otutu ihe ndi ozo.
“Na-agbanwe agbanwe mgbe niile, na-emeziwanye ma na -emepụta ihe ọhụụ ruo ọtụtụ iri afọ”
Maka ozi ọzọ: https://www.11er.at/
Tags: Akụkọ Ụlọ ọrụahịaNhazimpaghara ndukuazụmaahịa
Ndabere Ndagwurugwu - malitere na 1946
Oke okpomọkụ & ifufe- Barretts 'nduku - mkpuchi akuku
USITC - ugbu a ọrụ na fatịlaịza si Russia & Morocco